Uthola ini uma weqa iBichon Frize ngePoodle? Inja ye-teddy bear hybrid! Nakhu konke odinga ukukwazi mayelana nokuxuba okungafani kweBichon Poodle.
Kunokuningi kuMalusi Omnyama waseJalimane kunokubukeka kwakhe okuhle - inja esebenza kakhulu nesilwane sasekhaya, futhi. Funda kabanzi ukuze ufunde kabanzi ngale canine emangalisayo.
Ukubuyisa Okumnyama Okumnyama: Okufanele Ukwazi Ngokuqinisekile
Wake wambona uGolden Retriever omnyama futhi wazibuza ukuthi iGolide ingaba mnyama kanjani emhlabeni? Iqiniso liwukuthi, abakwazi. Uma ubona iGolide engumbala omnyama, kungenzeka kube olunye uhlobo olufanayo njengeFlat-Coated Retriever. Kodwa lokho akusho ukuthi iGolden Retrievers ayikwazi ukuba nezimpawu ezimnyama. Konke kwehlela kwabo ... Funda kabanzi
Izisekelo Zokuzala: Umlomo Omnyama Omnyama
IBlack Mouth Cur iyinja evikelayo yokuzingela kanye nesilwane somndeni esidlalayo futhi. Funda kabanzi ukuze ufunde kabanzi ngalolu hlobo olunamandla.
Ngabe amaBlack Labs enza abazingeli abahamba phambili?
IBlack Lab isetshenziswa kakhulu njengenja yezemidlalo futhi ithandwa kakhulu emphakathini wokuzingela, ngenxa yenkolelo yokuthi yizinja zezibhamu ezinamakhono.
Ama-bloodhounds ayizinhlobo zasendulo, futhi imvelaphi yawo ayicaci. Kodwa-ke, ngekhulu lesi-7, uSt. Hubert (usanta ongumvikeli womzingeli) nezindela zakhe baba nesandla esikhulu ekuthuthukiseni lolu hlobo. Ama-Bloodhounds namuhla asabhaliswe ne-FCI njenge-chiens du St. Hubert. Igama elithi 'Bloodhound' lisuselwa egameni elithi 'hound enegazi,' okusho ... Funda kabanzi
Ufuna ukwazi ngeBlue Nose Pitbull? Qhubeka ufunde futhi sizokusiza ukuthi uthole ukuqonda okujulile kokuthi iBlue Nose Pitbulls injani ngempela!
Inzalo yezinja zaseMolosser, iBoerboel noma iSouth African Mastiff iyinzalo ethembekile engeke ihlehlele emuva ukuvikela wena nomndeni wakho.
IBorder Collie - Yini Ongayilindela Kulenja Yezinja
Isici esivelele kunazo zonke zeBorder Collies isifiso sabo sokusebenza ngaphezu kwazo zonke ezinye izinto. Balusa behlise amakhanda, babheke izimvu ngeso elibukhali. Babona konke ukuhamba kwemfuyo, futhi basabela ngokuhamba, ngezinye izikhathi cishe ngokungabonakali, ukuze bayisebenzise noma bayiphikise. Ukunyakaza kwabo bobabili ... Funda kabanzi
Ngabe iBorder Collie Australian Shepherd ixuba enye yezinja eziphelele?
Izinja zokwalusa zingama-canine avelele, kepha kuthiwani uma ungahlanganisa izinhlobo ezimbili ezisebenza kanzima? Hlangana ne-Border Collie Australian Shepherd mix AKA Border Aussie.
I-Border Collie German Shepherd Mix iyi-high-energy crossbreed ephelele emindenini esebenzayo. Thola ukuthi yini eyenza iShollie isilwane esikhulu.
Ukuhlanganisa ubuhlakani beBorder Collie neLabrador Retriever enengane, futhi uzothola ukuxuba okusebenza kanzima kweBorder Collie Lab AKA Borador!
Ngabe ufuna inhlanganisela yezinja enamandla, ehlakaniphile nenolaka? Ungabe usaqhubeka, wethula inhlanganisela yeBorder Collie Blue Heeler. Funda lapha konke odinga ukukwazi ngalenja emangalisayo.
Ingabe i-American Terrier yaseMelika yonke iyinja enhle kuwe?
IBoston Terrier encane kodwa enemisipha ithandwa kakhulu emhlabeni jikelele. Qhubeka ufunda ukuthola konke odinga ukukwazi ngale mphuphu enesibindi.
Uma uthanda inja ehlakaniphile kunazo zonke emhlabeni kanye ne-pooch ethandekayo enezinwele ezisontekile njengabangane bakho be-canine, thola i-Border Collie Poodle mix (AKA Bordoodle).
Kungani ukuxubana kweBoston Terrier Pug kuzokujabulisa
Uzibuza ukuthi ngabe ukuxubana kweBoston Terrier Pug (AKA Bugg) kuyisilwane esifanele kuwe? Le ndatshana yemihlahlandlela yokuzala izokusiza unqume ukuthi ngabe le nja iyifanela yini indlela yakho yokuphila.
Yize benemisipha yangaphandle futhi bekhathazekile, futhi banenkinga yokukhathazeka, amaBoxers ayathandeka, aphakeme kakhulu, anamandla, ayazivikela futhi anomoya omnandi.
Ukuhlanganiswa kweBoxer Beagle kuyinja ethanda ubumnandi enamandla okusindisa. Funda kabanzi mayelana nalokhu kuqhekeka nokuthi kungani ilungele imindeni esebenzayo.
Bulloxer: Iyini inja yokuxuba yeBoxer Bulldog?
Izinhlobo ezihlukumezayo ngayinye inezici zayo ezihlukile, kepha kuthiwani uma siziwela ndawonye? Singathanda ukuthi uhlangane nomxube weBoxer Bulldog (AKA Bulloxer).
Ngabe iBoxerdoodle iyiDoodle ekufanele? Thola okuningi ngeBoxer Poodle hybrid, nokuthi kuzoba njani ukuba ngumnikazi wale fido.
bichon frize ithoyizi poodle mix
ibiza malini i-shorkie
umalusi omnyama no-tan waseJalimane
inja enjani i-whoodle
isigamu se-pug isigamu umalusi waseJalimane
ilebhu emnyama nomgodi wokuxuba